Casa Alma - 5 imizuzu ukusuka Naples Airport
Casa Alma linokuthwala abantu 5 intuthuzelo zizonke, xa kwintendelezo labucala kwakhona inikeza yokupaka imoto enye (ngentlawulo) .Le isakhiwo uqinisekisa iyonke wabucala kunye noxolo, kananjalo yokuhlala libekwe 4 km kude. Ukusuka kwisikhululo seenqwelo-moya Iimitha ezingama-300 ukusuka kwiParkinGo kunye ne-EconomyParking kwiipaki zeemoto zesikhululo seenqwelomoya. Kukho inkonzo yezothutho ukuya kuthi ga kwi-3 yabantu kwisikhululo seenqwelomoya kunye nezibuko okanye kumbindi wesixeko apho unokuthatha izikhitshane ukutyelela iziqithi.
Siye bacinga ngayo yonke into ukuze ukuhlala e Casa Alma kahle lula kangangoko kunokwenzeka, le yokuhlala yahlulwe ngolu hlobo lulandelayo:. Balcony zabucala ngaphandle, indawo abaphila ne ekhitshini, ifriji, microwave eziko, itafile banzi kakhulu screen TV ekhoyo flat , emva koko kukho igumbi lokuhlambela elinabo bonke ubuntofontofo, ekugqibeleni kukho amagumbi amabini okulala kunye ne-wardrobe kunye ne-flat screen TV.
Iimitha ezimbalwa ukusuka kwindlu kukho ivenkile enkulu, ibha, ivenkile ethengisa ukutya eneemveliso zeCampania kunye nesikhululo sebhasi esikufutshane sikumgama weemitha ezingama-25.
Malunga neemitha ezingama-300 ukusuka kukho indawo entsha kraca yokuThenga i-"La Birreria" eneevenkile ezingama-60 ngaphakathi.
Lo mhlaba umi kumgama oziikhilomitha ezi-1 ukusuka kwi-ANAS 543 Median Axis edibanisa iidolophu ezisemantla eNaples, kude kancinane ukuya, kumgama oziikhilomitha ezi-3.6, yindlela yaseNaples ejikelezayo kunye nohola wendlela odityaniswe kwisikhululo seenqwelomoya.
Ngayo nayiphi na imfuno ungaqhagamshelana nathi ngqo kwiselfowuni yam okanye kabawo nangaliphi na ixesha.